လိဒျနဲ့ပှဲမှာ နညျးဗြူဟာ ဆရာကွီး ကို ဆိုလျးရှား ဘယျလိုရငျဆိုငျမလဲ…? – Premier League Special
၂၀၀၄ခုနှဈ ပရီမီးယားလိဂျရာသီပွီးဆုံးခြိနျမှာ အဆငျ့(၁၉)နဲ့ တနျးဆငျးသှားခဲ့တဲ့ လိဒျကို ပရီမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲတဈပှဲ အနနေဲ့ ယူနိုကျတကျဟာ အိမျကှငျးအိုးထရကျဖိုဒျမှာ ပထမဆုံးအကွိမျ ပွနျလညျရငျဆိုငျရမယျ့ပှဲဖွဈပါတယျ။ တဈခြိနျက အင်ျဂလနျရဲ့ နှငျးဆီပွိုငျပှဲ လို့ နာမညျကြျောခဲ့ကွတဲ့ ဒီနှဈသငျးရဲ့ ပွနျလညျတှဆေုံ့မှုဟာဘယျလိုဖွဈလာမလဲ….ဆိုလျရှား ကတော့ ဒီအခြိနျရောကျလာဖို့ သူအကွာကွီး စောငျ့ခဲ့ရတယျလို ထုတျဖျောပွောဆိုထားပါတယျ။
မနျယူအသငျးမှာ ဝါရငျ့တိုကျစဈမှူး ကာဗာနီပွနျကောငျးလာလို့ ဒဏျရာပွဿနာအသဈမရှိတော့ပမေယျ့ လိဒျနဲ့ပှဲအတှကျ နညျးပွဆိုးလျရှားက ဘယျသူတှကေိုပှဲထုတျမလဲဆိုတာ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးနပေါတယျ။
ကာဗာနီဟာ လူစာရငျးမှာ ပါလာမယျဆိုရငျလညျး ပှဲထှကျလူစာရငျးကနပေါဝငျဖို့မရှိသလို ခရစ်စမတျကာလ ပှဲကပျြ ကလညျးနီးကပျလာတာကွောငျ့ အပွောငျးအလဲရှိတဲ့ လူစာရငျးကိုပှဲထုတျရမှာ ဖွဈလို့နောကျပိုငျးသူ့ လူရှေးခယျြမှုတှကေ ပိုပွီးစောငျ့ကွညျ့ခငျြစရာ ဖွဈလာတာပါ။
မနကျဖွနျ လိဒျနဲ့ပှဲမှာ ရှကျဖီးယူနိုကျတကျကို အနိုငျရခဲ့တဲ့ လူစာရငျးမှာ မပါခဲ့တဲ့ ဒီဂီယာ၊ တှနျမီနေးနဲ့ လုချရှော တို့အားလုံးပွနျပါလာမှာဖွဈပါတယျ။
ရှကျဖီးနဲ့ပှဲမှာ ပေါ့ဂျဘာ ခွစှေမျးပွနျပွခဲ့တဲ့အတှကျ လိဒျနဲ့ပှဲစဉျမှာ သူ့ကိုပှဲထှကျစာရငျးကနသေုံးမှာ သခြော သလောကျရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကှငျးလယျမှာ ပေါ့ဂျဘာနဲ့အတူ ကစားအားကောငျးမှနျတဲ့ တှနျမီနေး တို့ကို ဆိုးလျရှားက ပှဲထုတျလာနိုငျပါတယျ။
ခံစဈမှာတော့ လုချရှော၊ မကျဂှိုငျးယား၊ လငျဒီလော့ဖျ၊ ဝမျဘဈဆာကာတို့သာ နရောရလာမှာဖွဈပွီး နညျးဗြူဟာလိုအပျခကျြရှိမှသာ တဲလကျဈက လူစားဝငျလာမှာဖွဈပါတယျ။
ကှငျးလယျတိုကျစဈအတှကျတော့ ဖာနနျဒကျဈက ထုံးစံအတိုငျး ကြောနံပါတျ ၁၀ နရောမှာဘဲ ကစားမှာ ဖွဈပွီး တိုကျစဈကိုတော့ ရှကျဖီးနဲ့ပှဲမှာ ဒီရာသီပထမဆုံးဂိုးရလို့ စိတျအားတကျနတေဲ့ မာရှယျ ကဦးဆောငျလာမှာပါ။
တောငျပံနှဈဖကျမှာတော့ ရကျရျှဖို့ဒျ နဲ့ ဂရငျးဝုဒျတို့ ရှိနပေါလိမျ့မယျ။ ကှငျးလယျဗဟိုမှာ ပေါ့ဂျဘာနဲ့တှဲဖို့ တှနျမီနေးက ဦးစားပေးခံရမယျဆိုပမေယျ့ ဆိုးလျရှားက ဘယျလိုပုံစံနဲ့ လူအပွောငျးအလဲ လုပျမလဲဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာဖွဈပါတယျ။
အသကျ ၃၃ နှဈရှိပွီဖွဈတဲ့ ကာဗာနီဟာ ဒဏျရာကွောငျ့ မနျယူရဲ့နောကျဆုံး ၃ ပှဲကိုလှဲခြျောခဲ့သူဖွဈပွီး သောကွာနမေ့နကျကတညျးက လကေ့ငျြ့ခနျးတှပွေုလုပျနလေို့ လိဒျနဲ့ပှဲမှာ ပါဝငျနိုငျမယျလို့ ဆိုးလျရှားကအတညျပွုထားပါတယျ။
လိဒ်နဲ့ပွဲမှာ နည်းဗျူဟာ ဆရာကြီး ကို ဆိုလ်းရှား ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ…?
၂၀၀၄ခုနှစ် ပရီမီးယားလိဂ်ရာသီပြီးဆုံးချိန်မှာ အဆင့်(၁၉)နဲ့ တန်းဆင်းသွားခဲ့တဲ့ လိဒ်ကို ပရီမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲ အနေနဲ့ ယူနိုက်တက်ဟာ အိမ်ကွင်းအိုးထရက်ဖိုဒ်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ပြန်လည်ရင်ဆိုင်ရမယ့်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်က အင်္ဂလန်ရဲ့ နှင်းဆီပြိုင်ပွဲ လို့ နာမည်ကျော်ခဲ့ကြတဲ့ ဒီနှစ်သင်းရဲ့ ပြန်လည်တွေ့ဆုံမှုဟာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ….ဆိုလ်ရှား ကတော့ ဒီအချိန်ရောက်လာဖို့ သူအကြာကြီး စောင့်ခဲ့ရတယ်လို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။
မန်ယူအသင်းမှာ ဝါရင့်တိုက်စစ်မှူး ကာဗာနီပြန်ကောင်းလာလို့ ဒဏ်ရာပြဿနာအသစ်မရှိတော့ပေမယ့် လိဒ်နဲ့ပွဲအတွက် နည်းပြဆိုးလ်ရှားက ဘယ်သူတွေကိုပွဲထုတ်မလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။ ကာဗာနီဟာ လူစာရင်းမှာ ပါလာမယ်ဆိုရင်လည်း ပွဲထွက်လူစာရင်းကနေပါဝင်ဖို့မရှိသလို ခရစ္စမတ်ကာလ ပွဲကျပ် ကလည်းနီးကပ်လာတာကြောင့် အပြောင်းအလဲရှိတဲ့ လူစာရင်းကိုပွဲထုတ်ရမှာ ဖြစ်လို့နောက်ပိုင်းသူ့ လူရွေးချယ်မှုတွေက ပိုပြီးစောင့်ကြည့်ချင်စရာ ဖြစ်လာတာပါ။ မနက်ဖြန် လိဒ်နဲ့ပွဲမှာ ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်ကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ လူစာရင်းမှာ မပါခဲ့တဲ့ ဒီဂီယာ၊ တွန်မီနေးနဲ့ လုခ်ရှော တို့အားလုံးပြန်ပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရှက်ဖီးနဲ့ပွဲမှာ ပေါ့ဂ်ဘာ ခြေစွမ်းပြန်ပြခဲ့တဲ့အတွက် လိဒ်နဲ့ပွဲစဉ်မှာ သူ့ကိုပွဲထွက်စာရင်းကနေသုံးမှာ သေချာ သလောက်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကွင်းလယ်မှာ ပေါ့ဂ်ဘာနဲ့အတူ ကစားအားကောင်းမွန်တဲ့ တွန်မီနေး တို့ကို ဆိုးလ်ရှားက ပွဲထုတ်လာနိုင်ပါတယ်။ ခံစစ်မှာတော့ လုခ်ရှော၊ မက်ဂွိုင်းယား၊ လင်ဒီလော့ဖ်၊ ဝမ်ဘစ်ဆာကာတို့သာ နေရာရလာမှာဖြစ်ပြီး နည်းဗျူဟာလိုအပ်ချက်ရှိမှသာ တဲလက်စ်က လူစားဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကွင်းလယ်တိုက်စစ်အတွက်တော့ ဖာနန်ဒက်စ်က ထုံးစံအတိုင်း ကျောနံပါတ် ၁၀ နေရာမှာဘဲ ကစားမှာ ဖြစ်ပြီး တိုက်စစ်ကိုတော့ ရှက်ဖီးနဲ့ပွဲမှာ ဒီရာသီပထမဆုံးဂိုးရလို့ စိတ်အားတက်နေတဲ့ မာရှယ် ကဦးဆောင်လာမှာပါ။ တောင်ပံနှစ်ဖက်မှာတော့ ရက်ရ်ှဖို့ဒ် နဲ့ ဂရင်းဝုဒ်တို့ ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ ကွင်းလယ်ဗဟိုမှာ ပေါ့ဂ်ဘာနဲ့တွဲဖို့ တွန်မီနေးက ဦးစားပေးခံရမယ်ဆိုပေမယ့် ဆိုးလ်ရှားက ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ လူအပြောင်းအလဲ လုပ်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၃၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကာဗာနီဟာ ဒဏ်ရာကြောင့် မန်ယူရဲ့နောက်ဆုံး ၃ ပွဲကိုလွဲချော်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး သောကြာနေ့မနက်ကတည်းက လေ့ကျင့်ခန်းတွေပြုလုပ်နေလို့ လိဒ်နဲ့ပွဲမှာ ပါဝင်နိုင်မယ်လို့ ဆိုးလ်ရှားကအတည်ပြုထားပါတယ်။